Dagaallo xoogan oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Ahlu Sunnah oo ka bilawday gobolka Galgaduud. – Radio Daljir
Dagaallo xoogan oo u dhaxeeya Al-Shabaab iyo Ahlu Sunnah oo ka bilawday gobolka Galgaduud.
Dhuusomareeb,Jan 1 -Dagaallo xoogan oo u dhaxeeya ciidamada maamulka Ahlu-Sunah Waljamaaca iyo kooxda Al-Shabaab ayaa galabta ka bilawday deegaanka bulacle oo qiyaastii 20km dhanka koonfureed ka xigta magaalada Dhuuso mareeb ee xarunta gobolka Galgaduud.
Col.Cabdulaahi Axmed Bare oo u hadlay maamulka Ahlu-sunah Waljamaaca ee gobolka Galgaduud ayaa xaqiiqjiyay dagaalka inay qaadeen maamulkooda Ahlu-sunah Waljamaaca ,waxaana uu sheegtay inay la wareegayn goobo ay maamulaan kooxda Al-Shabaab.
Khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee uu gaystay dagaalkan ka bilaawday deegaanka Bulacle ayaa la’ogayn inta uu gaarsiisanyahay,waxaana wararka la helaayo ay xaqiijinayaan khasaare badan inuu ka dhashay dagaalka.
Kooxda Al-Shabaab ayaa wali ka hadlin dagaalkan iyo guulaha dagaal oo ay sheeganayaan maamulka Ahlu-sunah Waljamaaca,waxaana dagaalkan uu kusoo beegmayaa maalin kadib markii ay ciidamada dowladda faderaalka oo kaashanaya ciidamada dowladda Itoobiya dagaal xoogan ay kula wareegayn gacanta magaalada Baledweyne oo ay maamulayeen ururka Al-Shabaab.